Iwo Matatu eKiyi kune Kugutsikana kweVatengi: Kumhanyisa, Kushanda uye Zivo | ECommerce nhau
Iwo Matatu eKiyi kune Kugutsikana kweVatengi: Kumhanyisa, Kushanda uye Ruzivo
Vatengi vanoda kukurumidza sevhisi kana rubatsiro nerubatsiro neruzivo kuti kupi, riini uye sei ivo vanosarudza kuigamuchira, zvichibva pa CMO Kanzuru yekudzidza mhedzisiro yakaburitswa Chipiri.
Pamwe chete na SAP Hybris, uye iyo CMO Kanzuru vakaita ongororo pamhepo nevatori vechikamu zviuru zviviri, zvakaenzana zvakapatsanurwa pakati pevarume nevakadzi. 2,000 muzana vaigara muUnited States, uye 50 muzana vaigara muCanada nenyika dzeEurope.
Pakati pemhedzisiro iyi paiva nezvakawanikwa izvi:
52 muzana vakataura kuti mhinduro nekukurumidza ndizvo zvakakosha kune yakasarudzika vatengi ruzivo.
47 muzana vakati panofanira kuve nevashandi vane ruzivo vakagadzirira kubatsira apo uye pazvinenge zvichidiwa.
38 muzana vaida munhu wekutaura naye chero nguva, chero kupi.
38 muzana vaida ruzivo kuti vorida riini uye kupi.
9 muzana vaida nzanga dzakasimukira.
8 muzana vaida otomatiki masevhisi.
Vatengi vane zvinyorwa zve nzira dzakakomba wavanoda kuwana, ongororo yakafukurwa, kusanganisira pawebhusaiti yekambani, email, nhamba yefoni, uye munhu anoziva anoziva kutendeukira kwaari.
"Mafungiro evatengi, angave ari B2B kana B2C mapuratifomu, vari kuchinja, ”akadaro Liz Miller mutevedzeri wemutungamiri wenyika kushambadzira kuCMO Council.
Vatengesi "vatanga kubvunza kuti, 'Kana isu takagadzirira kuita sangano rinoteerera iro rinotsvaga data, kuongorora analytics, uye kunzwisisa kuti CRM inoshanda sei uye inoshanda sei uye kuti ivo vanokwanisa kufunga nezvezvakakosha izvi, kusanganisira zvepanyama" , Akadaro Miller.
Vatengi kana vatengi vanotarisira a inoshanda, inokurumidza uye yakapusa sevhisi Ivo havatarisiri kana kuda kuve nechero mhando yematambudziko pavanenge vachiita chero cheizvi zviitiko, asi zvakafanira uye zvakafanira kuti rubatsiro rwakavimbiswa rwunowanikwa kwavari nekukurumidza kana chimwe chinhu chikatadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » Iwo Matatu eKiyi kune Kugutsikana kweVatengi: Kumhanyisa, Kushanda uye Ruzivo
HP yadzoka: Inofanira kutumidzwa zita "Compaq"
Facebook Inotangisa "Tsvaga Kukura" Pasi Pose B2B Yekushambadzira Campaign